Umlandeli we-Aquarium, wenzelwe ini futhi yikuphi okuhle kakhulu? | Okwezinhlanzi
Sesivele sishilo kaningana ukuthi okunzima kakhulu, futhi okubaluleke kakhulu, lapho une-aquarium gcina indawo ezinzile. Lokho kusho ukuthi kufanele igcinwe ngaphakathi kwezinga lokushisa, ngosizo lwe-fan fan, nangamanzi ahlanzekile, esimweni ukuze izinhlanzi zikwazi ukuphila.
Namuhla sizogxila kowokuqala, ukuthi ungaligcina kanjani izinga lokushisa elizinzile e-aquarium, into enzima ikakhulukazi ezinyangeni ezishisayo ezinjengalezi. Ngakho-ke, sizobona izinhlobo ezahlukahlukene zabalandeli be-aquarium ezizosivumela ukuthi sigcine ukushisa kwe-aquarium kuzinzile, kanye nezeluleko zokuyikhetha kanye nemikhiqizo ehamba phambili, phakathi kwabanye. Ngendlela, ukuhlola izinga lokushisa ngokuthembekile, sincoma le enye i-athikili mayelana nokuhle kakhulu izinga lokushisa le-aquarium.
1 Abalandeli abahamba phambili be-Aquarium
2 Izinhlobo zabalandeli be-aquarium
3 Izinhlobo ezinhle kakhulu zabalandeli be-aquarium
4 Yini i-fan ye-aquarium?
5 Ungayikhetha kanjani fan fan
5.1 Usayizi we-Aquarium
5.2 Uhlelo Lokulungisa
6 Ungayisebenzisa kanjani kahle fan ye-aquarium
7 Umlandeli we-aquarium noma opholile? Ziyini izinzuzo nokwehluka ngakunye?
8 Ungathenga kuphi abalandeli be-aquarium abashibhile
Abalandeli abahamba phambili be-Aquarium
I-JBL PROTEMP Cooler x300...
I-JBL PROTEMP Cooler x200 -...
I-Easycargo 2 Pack 40 mm ...
Izinhlobo zabalandeli be-aquarium
Cishe, bonke abalandeli benza okufanayo, kepha njengenjwayelo kunemikhiqizo eminingi engenza umehluko futhi ivumelane ngokuphelele nenhlanzi yakho noma, ukwethuka, kube yinkunkuma engasizi ngalutho kithina. Kungakho sihlanganise izinhlobo ezivame kakhulu zabalandeli be-aquarium ukukusiza uthole ithuluzi elifanele.
Akungabazeki ukuthi enye yezinto eziwusizo kakhulu, uma kungenjalo ziwusizo kakhulu, ikakhulukazi uma ungazi lutho noma uma ungumuntu osemusha odabeni. Abalandeli beThermostat banomsebenzi wokuzenzekelayo ocisha ngokuzenzakalela lapho i-aquarium ifinyelela izinga lokushisa olifunayo, futhi ayasebenza uma lokhu kushisa kudluliwe.
Amanye ama-thermostats yidivayisi okufanele uyithenge ngaphezu kwe-fan. Aklanyelwe ukuxhunyaniswa nalokhu, futhi anenzwa yokushisa engena emanzini, ukukala izinga lokushisa elikulo. Imikhiqizo eyinhloko yezesekeli zama-aquariums, njenge-JBL, incoma ukuthi usebenzise i-thermostat yakho kuphela nabalandeli bohlobo lwabo ukugwema ukungahambelani okungenzeka nedivayisi, i-voltage ...
Umlandeli othulile Kubalulekile uma une-aquarium eduze (ngokwesibonelo, ehhovisi) futhi awufuni ukuhlanya ngomsindo. Kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthola, noma akugcwalisi ngqo lokho abakuthembisayo, ngakho-ke kulezi zimo kunconywa kakhulu ukuhlola imibono yomkhiqizo ku-intanethi.
Enye indlela, ethule kancane kunabalandeli, ama-cooler amanzi. (esizokhuluma ngakho ngokuhamba kwesikhathi), ezenza okufanayo, kodwa ngomsindo omncane.
I-ventilator enephenyo kubalulekile uma kuyimodeli ene-thermostat, ngoba, uma kungenjalo, ingabe enye idivayisi izosebenza kanjani? Imvamisa iphenyo iyintambo exhunywe ocingweni, nomtshina uqobo ekugcineni, okufanele ungene emanzini ukuthola izinga lokushisa.
Kulabo abangafuni fan enkulu futhi embi kukhona ezinye ezincane, imvamisa zinemiklamo emihle kakhulu futhi ehlanganisiwe, ebhekele ukuvuselela amanzi ku-aquarium yakho. Yebo kunjalo, sebenza kuphela nama-aquariums kuze kufike enanini elithile (kubheke kuma-specs wemodeli), njengoba emancane, ayisebenzi kahle kancane.
Izinhlobo ezinhle kakhulu zabalandeli be-aquarium
Hay izinhlobo ezintathu ezinkulu ezikhethekile emikhiqizweni ye-aquarium futhi, ikakhulukazi, kubalandeli nasezinhlelweni zokupholisa.
Abalandeli be-Aquarium ...
IBoyu yinkampani esungulwe eGuangdong (China) eneminyaka engaphezulu kwamashumi amabili yokwakha imikhiqizo ye-aquarium. Empeleni, Banazo zonke izinhlobo zemikhiqizo, kusuka kubalandeli kuze kube nakwabenzi bamaza, futhi kunamanzi amaningi ahlukahlukene, nefenisha encane nakho konke ukubenza babe nobuhle ngokwengeziwe.
Lo mkhiqizo weBarcelona awunikeli ngaphezulu noma ngaphansi kusukela ngo-1996 okwenza ama-aquariums nemikhiqizo eyenzelwe ukuthuthukisa izimpilo zezinhlanzi zethu zitholakale kubalandeli. Mayelana nabalandeli, nikeza enye yezindlela ezishibhile zokuvuselela i-aquarium yakho emakethe, kanye nezifudumezi, uma kwenzeka udinga umphumela ohlukile.
Ngokungangabazeki inkampani ehlonishwa kakhulu nomkhiqizo wemikhiqizo ye-aquarium enomlando omude kunayo yonke, njengoba isisekelo sayo sibuyela emuva eminyakeni engamashumi ayisithupha eJalimane. Yini enye, banezinhlelo eziningi zokupholisa ezitholakalayo, hhayi ama-aquariums amancane kuphela, kepha anikeza izixazululo ngisho nakuma-aquariums afinyelela kumalitha angama-200.
Yini i-fan ye-aquarium?
Ukushisa kungenye yezitha ezimbi kakhulu zezinhlanzi zethu, hhayi nje ngoba kunzima ukuthwala, kepha futhi ngoba, ekushiseni, umoya-mpilo omncane emanzini. Ngenhla, ezinhlanzini inqubo eguqukayo iyenzeka, ngoba ukushisa kuyazenza futhi kubangele ukuthi umzimba wazo udinge umoya-mpilo omningi ukuze uphile. Lokhu kusho ukuthi uma amanzi eshisa kakhulu, kuzoba nzima ukuthi izinhlanzi ziphefumule. Kungakho ukugcina ukushisa kwe-aquarium kubaluleke kakhulu, futhi kungani sidinga i-thermometer nohlelo lokungenisa umoya oluphethe ukugcina amanzi asezingeni elifanele lokushisa.
Ungayikhetha kanjani fan fan
Njengoba sibonile ngaphambili, kunezinhlobo eziningana zabalandeli ezitholakalayoKuzoya ngezidingo zethu kanye nokuncamelayo ukukhetha okukodwa noma okunye. Kungakho silulungiselele lolu hlu ngezinto ezijwayeleke kakhulu okufanele uzicabangele lapho ukhetha umlandeli we-aquarium ophelele:
Okokuqala, into ebaluleke kakhulu esizobheka ngayo ubukhulu be-aquarium. Ngokusobala, ama-aquariums amakhulu azodinga abalandeli abaningi, noma amandla amaningi, ukuze akwazi ukugcina amanzi asezingeni lokushisa elifanele. Uma uyothenga ifeni, bheka imininingwane, abalandeli abaningi bakhombisa ukuthi bangakanani amalitha abanamandla okupholisa.
Uhlelo lokulungisa ngu kuxhunyaniswe eduze nokuthi kulula kanjani ukuthi fan ihlangane futhi ihlukanise. Iningi linohlelo lokunamathisela oluxhuma phezulu kwe-aquarium ukuze luphole kusuka phezulu, enye yezindlela ezisheshayo futhi ezilula kakhulu zokukhipha nokususa ifeni bese uligcina lapho singasaludingi, njengoba kungenzeka, kuya ngokuthi ake siphile, ukuthi siyisebenzisa kuphela ezinyangeni ezishisa kakhulu zonyaka.
Njengoba sishilo ngaphambili, umsindo we-fan yinto okufanele uyicabangele uma une-aquarium ehhovisi noma egumbini lokudlela futhi awufuni ukuhlanya. Yize amamodeli alula ngokuvamile awahlali athule kakhuluKuyindlela ethakazelisa kakhulu ongabheka kuyo imininingwane yomkhiqizo. Kulokhu, kunconywa kakhulu ukubona ukuthi abasebenzisi bacabangani ngomkhiqizo, noma ngabe bafuna ividiyo ku-YouTube ukubona ukuthi izwakala kanjani.
Ekugcineni, isivinini fan lihlobene namandla. Kwesinye isikhathi, noma kunjalo, kulula kakhulu ukuthenga abalandeli abathathu kokukodwa kunamandla amakhulu, ngoba lokhu kuzopholisa amanzi ngokulinganayo, okubaluleke kakhulu kuma-aquariums amakhulu.
Ungayisebenzisa kanjani kahle fan ye-aquarium
Ngaphezu kwesithandi se-aquarium, kukhona ezinye izinto ezisiza ukugcina izinga lokushisa kwamanzi lilungile. Ukufeza lokhu, landela izeluleko ezilandelayo:
Gcina i-aquarium kude nemithombo yokushisa eqondile noma ilanga (Isibonelo, uma liseduze kwewindi, vala amakhethini). Uma ukwazi, gcina igumbi le-aquarium lipholile ngangokunokwenzeka.
Vula ikhava phezulu ukuvuselela amanzi. Uma kunesidingo, yehlisa izinga lamanzi ngamasentimitha ambalwa ukuze izinhlanzi zakho zingagxumi.
Vala amalambu e-aquarium, noma okungenani ukunciphisa amahora abakuwo, ukunciphisa imithombo yokushisa.
Faka i-fan ngokulandela imiyalo yomkhiqizo. Kungcono ukuyibeka ukuze ihlanganise amanzi amaningi phezulu. Emanzini amakhulu, ungadinga iphakethe elinabalandeli abaningi ukuvumela amanzi aphole ngokulinganayo.
Ekugcineni, uhlola izinga lokushisa izikhathi eziningana ngosuku ukubona ukuthi izinga lokushisa lilungile. Uma kungenjalo, gwema ukushisa amanzi ngokungeza ama-ice cubes noma ukushintsha okungazelelwe kokushisa kungacindezela izinhlanzi zakho.
Umlandeli we-aquarium noma opholile? Ziyini izinzuzo nokwehluka ngakunye?
Noma inhloso yakho ifana, umshayeli opholile nopholile akuzona izinto ezifanayo. Eyokuqala ilula kakhulu, ngoba imane iqukethe ifeni noma amaningana apholisa amanzi avela phezulu, onobuhle bawo obuyinkimbinkimbi obuhambisana ne-thermostat evula noma icime ngokuzenzakalela lapho ithola ukuthi amanzi awekho ezingeni lokushisa elifanele.
Kunalokho, i-cooler iyithuluzi eliyinkimbinkimbi futhi elinamandla kakhulu. Ayigcini nje ngokugcina i-aquarium yakho kushisa elifanele, futhi ingagcina ukushisa okuvela kwezinye izinsimbi ezifakwe ku-aquarium. Ama-cooler atholakele kahle ama-aquariums amakhulu kakhulu noma abucayi kakhulu, yebo, abiza kakhulu kune fan.
Ungathenga kuphi abalandeli be-aquarium abashibhile
Azikho eziningi izindawo lapho ungathola khona abalandeli be-aquariumIqiniso liwukuthi, njengoba zingamadivayisi aqondile kakhulu avame ukusetshenziselwa izinyanga ezimbalwa zonyaka. A) Yebo:
En Amazon Yilapho uzothola khona abalandeli abaphezulu kakhulu, yize kwesinye isikhathi ikhwalithi yabo ishiya okuthile ongakufisa. Ngakho-ke, ikakhulukazi kulokhu, sincoma ukuthi ubheke ngokucophelela imibono yabanye abasebenzisi, abazokwazi ukukunikeza izinkomba zokuthi ngabe umkhiqizo uzoba wusizo kuwe noma cha.
Ngakolunye uhlangothi, ku izitolo zezilwane Okukhethekile, njengeKiwoko noma iTrendenimal, uzothola amamodeli ambalwa atholakalayo. Futhi, okuhle ngalezi zitolo ukuthi ungaziyela mathupha uzibone ngamehlo, futhi ubuze nomuntu esitolo uma unemibuzo.
Umlandeli we-aquarium angasindisa impilo yezinhlanzi zakho ezinyangeni ezishisayo zonyaka, ngalokho okungangabazeki ukuthi iyithuluzi eliwusizo kakhulu. Ake usitshele, izinhlanzi zakho zibhekana kanjani nokushisa? Ingabe unayo fan esebenza kahle kakhulu kuwe? Ngabe ufuna ukwabelana ngezeluleko zakho nokungabaza nabanye?
Indlela ephelele ye-athikili: Okwezinhlanzi » Izesekeli » Umlandeli we-Aquarium